Fake Page တစ်ခုကို Report ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ...? | Online Service Center Myanmar -->
Fake Page တစ်ခုကို Report ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ...?
ဒီနေ့တစ်ယောက်က အကူအညီလာတောင်းလို့ Fake Page, Scam Page, တွေကို Report ပြုလုပ်နည်းလေးတွေကို အသစ်ထပ်ပြီး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Fake Page, Scam Page, တွေ အလုပ်ခံရဆုံးက Cele တွေ၊ သတင်းဌာနတွေနဲ့ Personal Attack လုပ်ခံရသူတွေများပါတယ်။
တကယ်လို့ကိုယ် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ကိုယ့်စီးပွားရေးနဲ ့သက်ဆိုင်တဲ့ Page ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်သိထားတဲ့ Official မဟုတ်တဲ့ Page အတုတွေကိုတွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီနည်းလေးတွေနဲ့Report လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။
Fake Page ပြုလုပ်ခံရသူ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်တင်နည်း။
Computer ( Laptop or Desktop ) နဲ့သုံးသူများအတွက် -
Report ပထမနည်း ( Harassment )
1. အရင်ဆုံး Report လုပ်မည့် Page Timeline ထဲကိုဝင်ပြီး Share လေးနောက်က အစက်လေး ၃ စက်ကိုနှိပ်ပါ။
2. ပေါ်လာတဲ့ထဲက Harassment ကိုနှိပ်ပြီး Send ကိုနှိပ်ပါ။
3. Submit to Facebook for Review ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် မှိန်သွားပြီး အမှန်ခြစ်လေးပေါ်လာရင် Done ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆို ကိုယ့်ပုံစံ အတုလုပ်ထားပြီး နှောင့်ယှက်နေတဲ့ Fake Page ကို Report လုပ်တဲ့ ပထမနည်းလေးပြီးသွားပါပြီ။
Report ဒုတိယနည်း ( Fraud or Scam )
2. ေပၚလာတဲ့ထဲက Fraud or Scam ကုိႏွိပ္ပါ။
3. Copying information about me or my business. ကိုနှိပ်ပြီး Send ကိုနှိပ်ပါ။
5. Done ကို နှိပ်ပြီးရင် Report တင်နည်းနောက်တစ်ခုပြီးပါပြီ။
အပေါ်ကနည်း ၂ ခုလုံးပြီးသွားလျှင် အခုတင်လိုက်တဲ့ Report ဒုတိယနည်း ( Fraud or Scam ) အတိုင်းဝင်ပြီး Copying information about me or my business. အစား Fake Page ဆိုတာနဲ့ထပ်တင်ပါ။
အဲ့ဒါဆိုရင် ကာယကံရှင်အနေနဲ့က Report ပြုလုပ်နည်း ( ၃ ) နည်းနဲ့Report ပြုလုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
Mobile Phone နဲ့အသုံးပြုသူများအတွက် -
1. အရင်ဆုံး Report လုပ်မည့် Page Timeline ထဲကိုဝင်ပြီး Message လေးနောက်က အစက်လေး ၃ စက်ကိုနှိပ်ပါ။
အောက်ကဟာလေးက Fake Page ပြုလုပ်ခံရသူမဟုတ်ပဲ အခြားသူတွေက ကူညီပြီး Report တင်ပေးတဲ့နည်းလေးတွေပါ။
Report ပထမနည်း ( Pretending to be another business or person )
2. ေပၚလာတဲ့ထဲက Give feedback or report this Page ကုိႏွိပ္ပါ။
3. Send ကုိႏွိပ္ပါ။
4. Which business or person is this Page pretending to be?
ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ Enter Facebook Page name ဆိုပြီး Search box လေးတစ်ခုတွေ့ရပါမယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ Account အစစ်ရဲ့ Official Page Name or Page link ကိုထည့်လိုက်ပါ။ Official Page ပေါ်လာရင် Select လုပ်ပြီး Send ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
5. Done ကို နှိပ်ပြီးရင် Report တင်နည်းတစ်ခုပြီးပါပြီ။
3. Fake Page ကိုနှိပ်ပြီး Send ကိုနှိပ်ပါ။
1. အရင်ဆုံး Report လုပ်မည့် Page Timeline ထဲကိုဝင်ပြီး Message နောက်က အစက်လေး ၃ စက်ကိုနှိပ်ပါ။
3. Fake Account ကုိႏွိပ္ပါ။
အပေါ်နည်းလေးတွေအတိုင်း Report လုပ်ပေးလိုက်ရင် Fake Page, Scam Page, တွေကို Facebook team ကနေ စစ်ဆေးပြီးဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
နမူနာအနေနဲ့ Fake Page ပြုလုပ်ခံထားရသူရဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Fake Page ျပဳလုပ္ခံထားရသူ -
Official Account -
Erica May Sue Maung ( https://www.facebook.com/maysue.maung )
Official Page -
May Sue Maung
ဒါက Fake Page -
Erica May Sue Maung
ကဲ... အပေါ်က ပေးထားတဲ့ Fake Page ကို Report ထုပေးပြီး၊ ဒီနည်းလေးတွေကို လိုအပ်လာရင်သုံးဖို့ Save ထားလိုက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Aung Kyaw Soe ( 10.1.2019 - 10:30 PM )
Facebook Knowledge Sharing Technology Tutorial